एक महिलाको कथा : 'जसलाई न पुरुष मन पर्छ, न महिला' - Sabal Post
एक महिलाको कथा : ‘जसलाई न पुरुष मन पर्छ, न महिला’
नयाँदिल्ली- सधैं हाँसिरहने अनि स्टाइलिस कपडा लगाएकी सन्ध्या वंशलले आफू ४० वर्ष पुगेको बताउँदा पहिलोपटक विश्वास गर्न गार्‍है हुन्छ। ‘तपाईं हेर्दा ३० वर्षको झैं देखिनुहुन्छ, ४० वर्षको जस्तो त देखिँदै देखिदैन। यसको रहस्य के हो?’ ‘श्रीमान् छैनन्, प्रेमी छैन, परिवार छैन अनि टेन्सन छैन, मेरो रहस्य यही हो’, हाँस्दै उनले भनिन्।
परिवारभन्दा माथिको पहिचान परिवारको परम्परागत ढाँचामा आफ्नो पहिचान नहराओस् भन्नेमा निक्कै सचेत देखिन्छिन् सध्या। खुसी हुन परिवार, श्रीमान् अनि सन्तान हुनुपर्छ भन्ने उनी मान्दिनन्। उनको सोचाइमा परिवारको परिभाषा व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ।
केटाहरु मनै नपर्ने पनि हैन उनलाई। त्यो उमेरमा उनलाई केटाहरु मन पर्थे। केटाहरुसँग सँगत गर्न उनलाई रमाइलो लाग्थ्यो। तर जब सम्बन्ध यौनको चरणतिर पुग्न खोज्थ्यो उनलाई मन पर्दैनथ्यो। उनको शरीरले त्यो स्वीकारै गरेन। ‘लाग्यो मलाई यौन सम्बन्धको कुनै आवश्यकतै छैन।’ उनको मनमा यौन सम्बन्धलाई लिएर कुनै डर पनि थिएन। अनि यौनसम्बन्ध नहुँदा केही कमी भएको, केही छुटेको अनुभव पनि भएन उनलाई।
‘मलाई रोमान्टिक सम्बन्ध त मन पथ्र्यो, हात समातेर केटासँग हिड्दा रमाइलो लाग्थ्यो। तर मलाई कसैप्रति पनि यौन आकर्षणको अनुभवै भएन,’ उनले भनिन्, ‘मलाई मन पर्ने केटाको हात समातेर हिँड्दा रमाइलो लाग्थ्यो। अँगालो मार्दा रमाइलै हुन्थ्यो। तर यौन सम्बन्धको समयमा मलाई समस्या हुन थाल्यो। मेरो शरीरले प्रतिकृया नै गर्न छाड्थ्यो।’ उनलाई एक पटकमात्रै हैन, पटक-पटक यस्तो समस्या भयो। हरेक सम्बन्ध शरीरको नजिक पुगेपछि उनी पछि हट्न थालिन्। जब उनले आफ्नो समस्या एक साथीलाई सुनाइन्, उनले डाक्टरको सल्लाह लिन सुझाव दिइन्।
तर डाक्टरकोमा जानु अगाडि उनी आफैं आफ्नो समस्याबारे बुझ्न चाहन्थिन्। यसका लागि उनले इन्टरनेट सर्च गर्न थालिन्। पढ्न थालिन्। यौनका बारेमा जानकारी दिने साइटमा गएर पढ्न थालिन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा रहेको एसेक्सुअलसम्बन्धी ग्रुपसँग पनि जोडिइन्। ‘पहिला त मलाई आफैंमा ठूला समस्या छ झैं लागेको थियो। मेरो सम्बन्ध टुट्नुमा आफैंलाई दोषी मान्न थालेको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर जब एसेक्सुआलिटीबारे पढ्न थालें अनि आफूले आफैंलाई स्वीकार गर्न थालें। मैले बुझें न ममा कुनै रोग छ न म असामान्य नै हुँ भनेर ।’
त्यसपछि उनले आफ्नो लागि केटा साथी खोज्नै छाडिदिइन्। मजस्तै पुरुष फेला पनि पर्न सक्छन्। तर एक तहको सम्बन्धपछि उसको चाहना अगाडि बढ्न सक्छ,’ उनले भनिन् ‘तर म अब कुनै मूल्यमा पनि सम्झौता गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले साथी खोज्ने र डेटमा जान बन्दै गरिदिएँ।’ बच्चा मन पर्दैन? आमा बन्न मन लाग्दैन? उनले भनिन्‘ बच्चा मन पर्छ, तर अर्कैको।’
“जय नेपाल” पुस्तक अमेरिकामा प्रकाशन हुने !